Macluumaad ku saabsan corona - Östersund.se
Macluumaad ku saabsan corona
العربية English Farsi ትግርኛ
Halkan waxaan ku soo aruurinay macluumaad iyo xiriiriyeyaal/links loogu talagalay kuwa raba fahfaahin dheerad ah.
Su`aalaha caadi ahaan lays waydiiyo iyo jawaabtooda
Dugsiyada xannaanadda iyo dugsiyada biloowga/hoose/dhexe ma la xiri doonaa?
Jawaab: Waqtigan xaadirka ah dugsiyada xannaanadda iyo dugsiyada biloowga/hoose/dhexe way furan yihiin.
Waxaan hab taxadarsan tixraacna horumarka dhacdooyinka ee qarmeed iyo goboleed ba, waxaana heegan u nahay in xaaladda ay hab keddis ah isku beddeli karto. Sidaas awgeed, wuxuu Maamulka Dowladda hoose isku diyaarinayaa in uu albaabada u xiro dugsiyada xannaanadda iyo dugsiyada biloowga/hoose/dhexe, waa haddii lagamaarmaan ay noqoto, kaddib waxbarashada laga sii wado iyagoo ardayda guryahooda ku sugan.
Maamulka arrimaha ilmaha iyo waxbarashada, wuxuu ku hawlan yahay arrinta iyo sidii loo sugo tayada dugsi-dhigashada ardayda dugsiga biloowga/hoose/dhexe, xitaa markii ay jirto xaalad adag.
Xaaladee ayuu ubadkayga usan tegi karin dugsiga xannaanadda ama dugsiga biloowga/hoose/dhexe?
Jawaab: Waxaan tixraacna qodobada hab-maamuleedka Hay`adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha [Folkhälsomyndigheten]. Kuwaasoo ku xusan in ilmaha aanan lahayn calaamadaha cudurka ay tegi karaan dugsiga xannaanadda. Sido kale ardayda aanan lahayn calaamadaha cudurka way tegi karaan dugsiga biloowga/hoose/dhexe. Nidaamku waa sidaasi xitaa haddii u jiro qof qoyska ka tirsan oo la dhiban calaamadaha cudurka.
Haddaba sidii hoos loogu dhigi lahaa faafinta cudurka, waa in xilhaayeha xannaanadda/waalidka, ardayda iyo shaqaalaha ay fiirogaar siiyaan calaamadaha cudurka sida:
Calaamadaha cudurka oo fudud sida dhuun-xannuun, hargab iyo xannuunka murqaha iyo kalagoysyada.
Ilmaha iyo ardayda oo leh calaamadaha cudurka waa in ay guryahooda iska joogaan. Haddii Ilmaha ay muujiyaan calaamadaha cudurka iyagoo ku sugan dugsiga, wuxuu macallinka durbadiiba la xiriirayaa xilhaayeha xannaanadda/waalidka kaddib ka codsanayaa in sida ugu dhaqsida badan ka kaxeeyaan dugsiga.
Taladaan waxay khuseeysaa dhammaan Ilmaha iyo ardayda, iyadoo fiirogaar aan la siin haddii goor dhow ay socdaal ka soo noqdeen iyo in kale.
Maxay tahay macnaha [tillträdesförbudet] ee xiriirka la leh goobaha dugsiyada Dowladda hoose?
Jawaab: Waxaa hirgalay nidaam qofka ka mamnuucayo/aan oggolayn in uu booqdo goobaha dugsiyada xannaanadda / goobaha wakhtilummiska / dugsiyada biloowga/hoose/dhexe / dugsiyada biloowga/hoose/dhexe gaarka ah. Dadyoowga goobahaas ka hawlgala oo keliya ayaa loo oggol yahay. Dadkaas waxaa kamid ah Ilmaha iyo ardayda, dadyoowga ilmaha keena kana kaxeeya goobaha iyo shaqaalaha hawlgal goobaha ka qaban doono.
Qofka xilhaayeha xannaanadda/waalidka ah ayaa xulan karo qofka ku habbon in uu ilamaha u wehliyo kana ka soo kaxeeyo dugsiyada.
Dadyoowga kale waa ka mamnuuc/looma oggola in goobaha ay booqdaan ama ku sugnaadaan. Dugsiyada way furan yihiin ilaa go`aan kale laga gaarayo.
Maktabadaha ma furan yihiin?
Jawaab: Haa, dhamaan maktabadaha degmada ku yaalaan waqtigan xaadirka saacadaha caadiga ah ayay furan yihiin. Haddii xaaladda ay wax iska bedesho waxaad warbixin cusub ka heli doontaan boggan
Goobaha lagu dabaalado ma furan yihiin?
Jawaab: Haa, waqtigan xaadirka way furan yihiin. Goobaha lagu dabaalado way furan yihiin ilaa uu hab-maamuleed qarmeed oo cusub lagu dhawaaqo.
Shaqada waa layga fadhiisiyay/layga eryay ama sabab kale darteeda ayaan shaqo-doone u ahay, shaqo aan codsan karo ma idinka heli karaa?
Jawaab: Dowladda hoose Östersund waxay imminka ku mashquulsan tahay qorshaynta hal xaalad, taasoo la filanaayo in muddo dheer ay shaqaalaha xannuunsadaan ama ay ka maqan yihiin hawlihii bulshada muhim u ahaa oo ay u qaban jireen sida:
Xannaanadda Ilmaha iyo dugsiyada; sidii waalidiinta loo siiyo fursadda ay ku shaqaysan laheeyeen.
Xannaanadda dadyoowga aad ugu baahan iyo waayeellada; waa dhaqdhaqaaq habeen iyo maalin la qabto oona albaabada loo xiri karin.
Shaqaalaha jikada, ilaalinta, nadaafadda, gaadiid iwm.
Caawinaaddaada waan u baahan nahay. Haddii aad xiisaynayo shaqooyinka noocaas ah fadlan na wargeli, adigoo isticmaala adeegga loo yaqaanno [e-tjänst].
Ma la iga caawin karaya so adeegashada cuntada iyo daawooyinka iyo waxyaabo kale?
Dowladda hoose Östersund waxay hirgelisay adeeg ku salaysan farsamada digitalka [e-tjänst], iyo lambar taleefan kaasoo dadyoowga ka tirsan kooxaha u nugulan/u adkaysan karin cudurka, ay nagu wargelin karaan in ay u baahan yihiin in laga caawinno soo adeegashada.
Haddii aad isticmaali kartid adeegga ku salaysan farsamada digitalka [e-tjänst] adeegso. Af-iswiidish oo keliya ayuu ku qoran yahay. Haddii aadan isticmaali karin adeegga, soo garaac lambarka taleefanka ee hoos ku qoran.
Haddii aadan ku hadlin af-iswiidish, waxaa caawinaad waydiisan karta qof luqadda ku hadla oo aad garanayso, kaasoo kaddib codsigaaga noo soo gudbiya.
Kaddib markii adigoo adeeganayo adeeg ku salaysan farsamada digitalka [e-tjänst] ama khadka taleefanka nagu wargeliso, waxaan codsigaaga u gudbinayna maamulka Laanqayrta cas [Röda korset]. Iyaga ayaa kaddib kula soo xiriiri doono, oo ku waydiin doono waxa aad u baahan tahay in lagu soo iibiyo.
Adeegga awgiis wax kharasha ma bixinayso, waa lacag la`aan. Kharashaka badeecadaha lagu soo iibiyay waxaad ku bixin kartaa qaansheegasho ama [swish].
Taageero dadyoowga ka tirsan kooxaha u nugulan/u adkaysan karin cudurka (e-tjänst ku qoran af-iswiidish)
Ama wac: 063-14 42 25
Macluumaadka maamulada kale
Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo - Hay'adda Caafimaadka Dadweynaha